Ny lalao video 'Scream' dia manome fahafahana anao ho tafavoaka velona ao amin'ny Trano 'Scream'
Home Games Ny lalao video 'Scream' dia manome fahafahana anao ho tafavoaka velona ao amin'ny Trano 'Scream'
Afaka Tafavoaka ve Ianao?
by Trey Hilburn III Janoary 12, 2022
by Trey Hilburn III Janoary 12, 2022 4,760 hevitra
niantsoantso dia eto ihany! Afaka mandeha any amin'ny teatra ianao rahampitso alina ary hahita amin'ny fomba ofisialy ny meta horor mipoitra eo amin'ny efijery lehibe. Aza kivy amin'ny écran kely anefa fa tsy slouch koa! Raha ny marina, ny efijerin'ny solosainao dia toerana tsara hananana a niantsoantso mifototra amin'ny traikefa nahafinaritra tamin'ny alàlan'ny vaovao niantsoantso lalao.
Ny lalao dia azo atao ao amin'ny navigateur amin'ny alalan'ny lohany mankany survivescreamhouse.com. Ny traikefa dia manome anao fahafahana hitsidika trano iray mahazatra hahitanao famantarana. Eny an-dalana dia hahita atody rad paska ianao ary famantarana momba ny zavatra andrasana amin'ny sarimihetsika. Oh, ary tsy maintsy tafavoaka velona amin'ny Ghostface ianao. Ao an-trano izy ary manandrana mihaza anao.
The niantsoantso Ny lalao dia tapaka toy izao:
Te hilalao lalao ve ianao? Ity lalao 360 interactive sy misafidy-nao-own-adventure ity dia ahafahan'ny mpilalao mijery ny trano Scream tany am-boalohany raha miezaka ny tsy hovonoin'ny Ghostface. Ny traikefa mifototra amin'ny tranonkala dia misy atody miafina miafina sy fanontaniana trivia momba ny franchise.
Dimy amby roapolo taona taorian'ny famonoan'olona feno habibiana nanafintohina ny tanànan'i Woodsboro mangina, nisy mpamono olona vaovao nanao saron-tava Ghostface ary nanomboka nikendry andiana zatovo hanangana ny tsiambaratelo tamin'ny lasa mahafaty tao an-tanàna.
Faly ve ianao mijery ny vaovao niantsoantso?